Zim, SA Lead Regional Mining (M&A) Activity With $323.8m Deals - Mining Zimbabwe
Zim, SA Lead Regional Mining (M&A) Activity With $323.8m Deals
South Africa and Zimbabwe had the biggest mining investment deals, which accounted for about $323.8 million (R4.66 billion) of global mergers and acquisition (M&A) activity in the mining and metals sector in 2019, new data has shown.
The 2019 top M&A deals for Zimbabwe and South Africa helped investment advisory companies such as Standard Bank, Prudential, Old Mutual, Imara Edwards, Coronation, and Citi Bank to climb up rankings for regional investment deals.
The top deals for South Africa had values ranging from a high of $152m and $135.6m to $16.3m, while for Zimbabwe the top deal was valued at $19.9m. Zimbabwean metals producers have also complained about power supply, which is negating productivity for nearly all major minerals such as gold, platinum, and nickel.
Chief executive at Zimbabwean PGM mines said that they expected production to be down by as much as 7 percent for this year_NewZimbabwe
Fuel prices up as petrol blending goes down
Norton takes centre stage in formalisation of mini...